ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ အဆီ၊ အခေါက်တွေအထင်းသားပေါ်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံကို တင်ခဲ့ပြီး Body Shaming လုပ်သူတွေကို စိန်ခေါ်ခဲ့တဲ့ နေခြည်ဦး - Cele Connections
သရုပ်ဆောင် နေခြည်ဦးကတော့ ခေတ်လူငယ်တစ်ယောက်ပီပီ တက်တက်ကြွကြွ သွက်သွက်လက်လက်နဲ့ ချစ်စရာကောင်းသူလေးတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦးက သူမရဲ့ ဖြစ်တည်မှုနဲ့ ပက်သတ်ပြီး အကုန်လုံးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြထားသလို မျက်နှာကို ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေ ပြုလုပ်တဲ့အထိကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိသူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပီပီ အနည်းနဲ့အများ ဝေဖန်မှုတွေရှိတဲ့ နေခြည်ဦးက ဒီကနေ့မှာလည်း သူမကိုယ်တိုင်တင်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနဲ့ Body Shaming လုပ်ခံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နေခြည်ဦးက သူမရဲ့ လက်မောင်းနဲ့ ဗိုက်က အဆီတွေကို လျှော့ချဖို့အတွက် ကိုယ်နေ့တိုင်းစားတဲ့ အစားအသောက်တွေနဲ့ပဲ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်လျှော့စားဖို့ Challenge ပြုလုပ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သော ဝေဖန်သူတွေကတော့ နေခြည့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဝေဖန်မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့် နေခြည်ဦးက “Body Shaming လုပ်သော comment များဖတ်ချင်ရင် comment မှာကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိသော မိန်းကလေးကိုကြည့်ချင်ရင် ဓါတ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ I challenge You. You challenge Me!! Lets see who wins in 7days ” ဆိုပြီး ဝေဖန်သူတွေကို စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
နေခြည်ကတော့ (၇) ရက်ဆိုတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ သူမရဲ့ အဆီပိုတွေကို လျှော့ချဖို့ ကြိုးစားသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးက နောက် (၇) ရက်မှာ နေခြည်တစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲသွားမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ပေးကြဦးနော်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကိုယျ့ကိုကိုယျယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ အဆီ၊ အခေါကျတှအေထငျးသားပျေါနတေဲ့ ဓာတျပုံကို တငျခဲ့ပွီး Body Shaming လုပျသူတှကေို စိနျချေါခဲ့တဲ့ နခွေညျဦး
သရုပျဆောငျ နခွေညျဦးကတော့ ခတျေလူငယျတဈယောကျပီပီ တကျတကျကွှကွှ သှကျသှကျလကျလကျနဲ့ ခဈြစရာကောငျးသူလေးတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ နခွေညျဦးက သူမရဲ့ ဖွဈတညျမှုနဲ့ ပကျသတျပွီး အကုနျလုံးကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးခပြွထားသလို မကျြနှာကို ခှဲစိတျပွုပွငျမှုတှေ ပွုလုပျတဲ့အထိကို ဖုံးကှယျထားခွငျးမရှိသူတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အောငျမွငျတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပီပီ အနညျးနဲ့အမြား ဝဖေနျမှုတှရှေိတဲ့ နခွေညျဦးက ဒီကနမှေ့ာလညျး သူမကိုယျတိုငျတငျထားတဲ့ ဓာတျပုံတဈပုံနဲ့ Body Shaming လုပျခံနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
နခွေညျဦးက သူမရဲ့ လကျမောငျးနဲ့ ဗိုကျက အဆီတှကေို လြှော့ခဖြို့အတှကျ ကိုယျနတေို့ငျးစားတဲ့ အစားအသောကျတှနေဲ့ပဲ ဆငျဆငျခွငျခွငျလြှော့စားဖို့ Challenge ပွုလုပျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခြို့သော ဝဖေနျသူတှကေတော့ နခွေညျ့ရဲ့ခန်ဓာကိုယျကို ဝဖေနျမှုတှေ ပွုလုပျခဲ့တာကွောငျ့ နခွေညျဦးက “Body Shaming လုပျသော comment မြားဖတျခငျြရငျ comment မှာကွညျ့ပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျမှုရှိသော မိနျးကလေးကိုကွညျ့ခငျြရငျ ဓါတျပုံကိုကွညျ့ပါ။ I challenge You. You challenge Me!! Lets see who wins in 7days ” ဆိုပွီး ဝဖေနျသူတှကေို စိနျချေါခဲ့ပါတယျ။
နခွေညျကတော့ (၇) ရကျဆိုတဲ့အခြိနျအတှငျးမှာ သူမရဲ့ အဆီပိုတှကေို လြှော့ခဖြို့ ကွိုးစားသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျကွီးက နောကျ (၇) ရကျမှာ နခွေညျတဈယောကျ ဘယျလိုတှပွေောငျးလဲသှားမလဲဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ပေးကွဦးနျော။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာ သားနဲ့သမီးကိုပါခေါ်ပြီး ကားတစ်စီးနဲ့ တစ်မြို့လုံးအနှံ့ ပံ့သကူအလှူလုပ်ခဲ့တဲ့ ပြေတီဦးနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
လူချင်းမိုင်တွေအများကြီးဝေးကွာနေပေမယ့်လည်း နှလုံးသားချင်းအမြဲနီးတဲ့ နိုင်းနိုင်းအတွက် အမှတ်တရမွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့တဲ့ ဇနီးလေး စန္ဒီချို